Desktop Converter kasoo horjeeddo Online MOV Converter (Quicktime)
> Resource > Video > Desktop vs Online MOV Converter (Quicktime)
Waxay ku xiran tahay doorashada qaab wax soo saarka, in aad marka hore isku dayi kartaa in rogo barnaamijka QuickTime in uu dhisay galay aad Mac. Taasi gaar ahaan anfacaya marka aad rabto in aad wax ka bedel la iMovie ama ku gubi gal DVD la iDVD. In kasta oo ay nolasha, wax badan oo ka mid ah dadka isticmaala ay horay u codsaday in loo soo jeedin habab kale oo laga heli karaa sabab u tahay doorashada kooban oo qaabab wax soo saarka oo ay taageerayaan, waafaqid ee koombiyuutarka file iyo sidoo kale tayada video dhamaadka. Sidaa awgeed, waxaa dhici karta inaad isku dayi kartaa in aad beddelid files QuickTime MOV la mid ah hababka hoos ku qoran; Habka 1: Iyada oo ah Converter MOV QuickTime online ama; Habka 2: Converter Desktop .
Habka 1: Online QuickTime MOV Converter
Habka 2: Desktop Converter
Haddii QuickTime ma awoodo inuu geliyaan ama ku guuldareysto inuu la kulmo video baahidaada, fadlan isticmaal kaliya video Converter xorta online hoos ku qoran. Noqon doonaa ku faraxsan in ay bartaan in ay jiraan dhowr ah oo taageeraya dhoofinta MOV ah (QuickTime) faylasha loogu diinta Waxaad. Wax kale oo aan ahayn, sidoo kale waxa aad u bedeli karaan in qaar ka mid ah qaabab file ugu caansan sida MP4 ah, AVI, FLV, wmv iyo iwm
Geedi socodka waa mid aad u sahlan, kaliya aad u baahan tahay in aad dhirtuba MOV video files ka buugga deegaanka oo geliyaan wareejisaa converters online.
Dhinaca kale si kastaba ha ahaatee, waxaad u bedeli karaan oo keliya mid ka mid file waqti. On top of in, xawaaraha diinta sidoo kale waa mid aad ugu xiran yahay xasiloonida iyo xawaaraha khadka Internetka aad adeegsanaysid. Wax kale oo aan ahayn, waa wax soo jiidasho leh haboon fudud diinta file hawl. Continue reading galay Habka 2 haddii aad u baahan tahay qaababka dheeraad ah.
Converter desktop A habboon markii aad u baahan tahay si loogu badalo ka badan haystaa sacab muggiis oo video files ujeedooyin tafatir dheeraad ah ama la abuuro DVDs kuu gaar ah. Xawaaraha diinta la dejiyo badan oo aad qaban karto beddelaad Dufcaddii. The Wondershare Video Converter Ultimate u Mac sidoo kale wuxuu awoodaa diinta faylasha aad la AAN tayada khasaaro.
Haddii aad u baahan tahay si loogu badalo aad MOV (QuickTime) files video for sixiddiisa la iMovie, si toos ah u aad xaalkaa karaa Video Converter Ultimate ah. Waa dhab ahaantii kama dambaysta ah qalabeed video Converter in aad waligaa guud ahaan soo sababtoo ah waxaad samayn kartaa oo aad ku gubi videos gal DVD ah oo dhan hal madal ay ku.
Si fudud u akhri tilmaamaha hoos ku faahfaahsan, si ay u si toos ah loogu badalo files MOV aad, iyada oo tafatir ka hor, in aad nuqulka ama iyaga gubi gal DVD ah.
Talaabada 1: diinta File
Burcad barnaamijka oo markaas:
Jiid-iyo-hoos u faylasha aad u gal interface ah,
Dooro Qaabka Output (guji calaamad-up arrow oo ka sarreeya buugga wax soo saarka),
Go'aanso folder soo saarka aad,
Riix Beddelaan .
Talaabada 2: Faylal ay tafatir
Guji Edit in ay jar, dalagga, geliso saamaynta, ku dar watermark ama subtitles,
Talaabada 3: Koobiyee ama DVD gubi
Dul u Gubashada 's tab (on madax ah interface),
Dooro mid ka mid Copy ama Guba ka Task ,
Dooro menu aad DVD ee (riix calaamada arrow-up ka sarreeya bar kaydinta aad DVD ee),
Dooro muuqa iyo Tayada ee DVD aad,
Riix Gubashada .
Freemake Video Downloader Alternative: Download Online Videos Si fudud
Wmv Free Player for Windows 8: Play wmv si habsami leh oo fudud loo Fayl
Sida loo geliyaan VOB Videos in YouTube
Software Muqaal u Mavericks, Waxaad samaysataa Muqaal in OS X Mavericks
Sida loo dar Videos aan Tayada-khasaaro